Ukudibanisa ukuThengiswa kweDijithali kwiNkxaso yakho | Martech Zone
Ukudibanisa ukuThengiswa kweDijithali kwiNkxaso-mali yakho
Lwesine, Okthobha 11, 2012 NgoLwesithathu, Oktobha 10, 2012 UThomas Stern
Inkxaso yentengiso ibonisa ixabiso elibalulekileyo ngaphaya kokubonakala kwegama kunye nokugcwala kwewebhusayithi. Abathengisi abanobuchule namhlanje bajonge ukufumana eyona nkxaso-mali, kwaye enye indlela yokwenza njalo kukusebenzisa izibonelelo zokuphuculwa kweinjini yokukhangela. Ukuphucula inkxaso-mali yentengiso nge-SEO, kuya kufuneka uchonge iintlobo ezahlukeneyo zenkxaso ezikhoyo kunye neendlela eziphambili eziyimfuneko ekuhlalutyeni ixabiso le-SEO.
Imidiya yesiNtu- Shicilela, iTV, iRadiyo
Inkxaso kumajelo osasazo esiqhelo ahlala ngokohlobo lokubekwa kwintengiso okanye ukuxhaswa okwenzeka ngqo kwiinkqubo (umz., “Lo myalezo uziswe kuwe ngo…”). Ngelixa oku kunokuba yindlela elungileyo yokuqhuba abasebenzisi kwiwebhusayithi yakho, iqulethe ixabiso elincinci le-SEO ngokwalo.
Nangona kunjalo kunokwenzeka ukuba kuphakanyiswe amandla endawo yokugcwala ukuxhasa amanyathelo akho e-SEO. Umzekelo, ukuba ubonelela ngethemba lokukhuthaza ukutyelela iwebhusayithi yakho ngenkxaso-mali, banike ithuba lokuba babelane ngephepha abangena kulo ngeendlela ezinje ngamaqhosha okwabelana noluntu kunye ne-imeyile. Izabelo zentlalontle zingathumela "imiqondiso" kwiinjini zokukhangela kwaye zinike ithuba lokuba abantu banxibelelane babuyele kwiwebhusayithi yakho ngezinye iisayithi ezinjengeeblogi kunye neeforamu.
Iintengiso zinokubonelela ngexabiso elikhulu le-SEO xa lakhiwe kwaye liphunyezwe ngokufanelekileyo. Kukho izinto ezibalulekileyo ekuqwalaselweni xa kujongwa ixabiso lentengiso.
Iphepha lephepha -Kukuba uGoogle akanakho ukubeka isitokhwe esininzi njengoko bebeqhele ukwenza kwiPageRank, ixabiso alikahambi kwaphela. Yenye yeendlela eziphambili zokumisela amandla amakhonkco aphumayo kwiwebhusayithi ethile.
Ukubuyiselwa -Iiwebhsayithi ezinxibelelana nawe zibhetele xa zigunyazisiwe kwaye kufanelekile. Xa kunokwenzeka, sebenzisa amandla e-SEO wokudibanisa amaqabane nomxholo ochaphazelekayo kwishishini lakho kunye neemveliso / iinkonzo.
Unxibelelwano olungaphandle -Into edla ngokunganakwa, kodwa enye ikhula ngokubaluleka njengoko uGoogle ehlaziya ii-algorithms zabo. Umthamo ophezulu wamakhonkco aphuma kwiwebhusayithi unokuvela "njengogaxekile" kwiinjini zokukhangela. Ukuba unikwe isibhengezo kunye nephepha umxholo wakho oza kuhlala kulo ligcwele iAddsense kaGoogle okanye unxibelelane nomnye baxhasi, inokuba ngumbono olungileyo ukudlula.
Inkxaso kwimidiya yoluntu
Inkxaso yemithombo yeendaba kwezentlalo inokuthwala ixabiso le-SEO, kwaye ifuthe labo kwi-SEO kunokwenzeka ukuba lonyuke njengoko iinethiwekhi zentlalo ziyaqhubeka nokwanda. Ukuba unikwe i-Tweet exhaswayo okanye iposti ye-Facebook njengenxalenye yobambiswano, kuya kufuneka ulinganise ixabiso kwiimpawu eziqhelekileyo zemetriki.
Ngaba le nkampani inomthamo omkhulu wabalandeli be-Twitter okanye abalandeli be-Facebook? Mhlawumbi okubaluleke ngakumbi, ngaba banenqanaba eliphezulu lokuzibandakanya phakathi kwamalungu oluntu lwabo? Ukuba uthatha isigqibo sokulandela inkxaso-mali ebandakanya ukukhankanywa kwimidiya yoluntu, qiniseka ukuba ubhala iTwitter okanye iposti ye-Facebook une-SEO engqondweni.
Faka imveliso okanye amagama enkonzo ojolise kuwo, kunye nekhonkco elibuyela kwiwebhusayithi yakho. Ukuthandwa yenye yezona zinto zibalulekileyo ezithunyelwe kwiinjine zokukhangela ezivela kunxibelelwano lwasentlalweni. Qinisekisa ukuba iqela lakho leendaba ezentlalo liphinda lenze i-tweeting okanye labelana ngezithuba ukuqhuba eyona ndibano inokwenzeka.
Gcina ukhumbula ukuba iinjini zokukhangela ziya kufunda imiqondiso yezoluntu kwaye zibonakalise ukuthandwa kwiwebhusayithi yakho yonke, kodwa ixabiso liya kuncipha ukuba awuqhubeki nokuthumela le miqondiso. Zama ukufumana inkxaso-mali ekhuthaza uphawu lwakho kwimidiya yoluntu ngendlela engatshintshiyo.
Inkxaso yevidiyo ihlala iza ngohlobo lokuqengqeleka kwangaphambili okanye ukubekwa kweentengiso ezikufutshane kwiindawo ezisekwe kwividiyo. Ukufakwa kweentengiso ezinje ngezi kungathumela ukugcwala kwiwebhusayithi yakho, kodwa zinexabiso elincinci le-SEO ngaphaya kwaleyo- ngaphandle kokuba ithuba lokuxhaswa kwevidiyo likwindawo eyaziwayo, yezithuthi eziphezulu njengeYouTube.
Ukuqala, jonga kwiqabane elinokubakho ukuze ubone ukuba baya kukubonelela ngekhonkco ngokusisigxina kwinkcazo yevidiyo. Ukuba kunokwenzeka, eli khonkco kufuneka lijikelezwe yinkcazo yephepha elinxibelelana nalo (kubandakanya igama elingu-1 okanye 2 lamagama aphambili) kunye nekhonkco elinombhalo we-anchor osisityebi.
Kubalulekile ukuba uxele ukuba amakhonkco kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni ezinje ngeYouTube zithathwa ngokuba "azilandelwa," nangona kunjalo, uninzi lwethu kwicandelo le-SEO likholelwa ukuba akukho makhonkco alandelayo asuka ekuhlaleni aya exabiseke ngakumbi, kwaye njengamajelo eendaba asele ekhankanyiwe. umzekelo wokuxhasa, uya kuqhubeka nokukhula kwixesha elizayo.
Izalathiso / Uluhlu lweNkxaso
Iiphakheji ezininzi zenkxaso ziya kubandakanya uluhlu ngaphakathi kwecandelo "labaxhasi" kwiwebhusayithi yeqabane. Olu luhlu lwamaphepha lunokusebenza ngokufanayo nakwikhombisi, ethi isekhona ithuba elihle le-SEO. Kukho ukuqwalaselwa okubalulekileyo kwamaphepha afana nala;
Iphepha lephepha - Njengoko kukhankanyiwe kwicandelo lezentengiso, jonga kwiPhepha leRekhodi yewebhusayithi eya kuthi ikubonise kwicandelo lenkxaso elizinikeleyo- phezulu, ngcono.
Inkcazo kunye neeKhonkco -Zama ukuqinisekisa ukuba awufumaneki kuphela kwiphepha elixhasayo, kodwa unenkcazo encinci kwaye unekhonkco lokubhaliweyo kwiwebhusayithi yakho. Iimpawu ziyindlela elula yokuseta la maphepha. Ikhonkco eliphuma kwilogo liya kuba nexabiso elithile, kodwa ufuna ngenene ukukhangela ikhonkco lokubhaliweyo kwaye ukuba kunokwenzeka, bhala inkcazo yesiko lakho kwishishini, iimveliso, njl. (Kugxilwe kwigama elingundoqo).
Ukuqukumbela, inkxaso-mali inokuthwala ixabiso elibalulekileyo le-SEO xa kuvavanywa kwaye kusenziwa ngokufanelekileyo. Ithuba ngalinye lenkxaso mali lahlukile, kwaye isindululo ngasinye sokuphunyezwa kufuneka senziwe ngokwesiko.
tags: ezentengisokukunikangcacisoamakhonkcoamakhonkco aphumayopagerankushicilelounomathotholoukubalulekaInkxaso kwimidiya yoluntuiNkxasoimidiya yemvelitvInkxaso yevidiyo
UThomas Stern ungusekela mongameli omkhulu weenkonzo zabaxumi e Idijithali yeZOG, uphumelele amabhaso aliqela kumkhankaso wobuchule bedijithali ovela eGannett Co Inc., ulilungu lebhodi yoMbutho woPhando ngeeNjini zoPhando (SEMPO) eArizona, kwaye uneziqinisekiso ezininzi kuGoogle. UStern une-BA kuQhakamshelwano loBuchule oluvela kwiYunivesithi yaseKansas, kwaye uneSatifikethi seMasters kuThengiso lwe-Intanethi kwiYunivesithi yaseSan Francisco. Ngexesha lakhe lasimahla, uStern uyakonwabela ukuhamba intaba, ukuhamba ngebhayisikile kunye nokuhamba.
I-Basecamp isungula iiTemplate zeProjekthi
Kutheni le nto ii-infographics zenza izixhobo zokuThengisa eziNkulu
Oktobha 11, 2012 ngo-2: 07 PM
Sineziphumo ezintle kunye nabaxhasi bethu kwiBhlog yeTekhnoloji yeNtengiso kwaye siqhubeka nokufumana ingqalelo enkulu kubaxhasi bethu. Ngombulelo, sihlala sikhuthaza iinkampani zabo kunye neenkonzo-ngelixa sichaza ubudlelwane bethu kunjalo. Ndicinga ukuba inkxaso-mali sisicwangciso esiliqili ekufuneka iinkampani ezininzi zisisebenzise. Inkxaso-mali esiyifumene kwibhlog yeTekhnoloji yeNtengiso iyaqhubeka nokusivumela ukuba sityale imali ekukhuthazeni indawo kunye nokufumana izithuthi ezongezelelekileyo- zona ke zona ziqhuba ngakumbi kubaxhasi bethu. Iposi enkulu, Thomas!
Oktobha 11, 2012 ngo-8: 16 PM
Iintengiso zikanomathotholo nezitv zisasebenza nanamhlanje? Ewe, inkxaso-mali iyinto entle kodwa kufuneka ihlalutywe ingakumbi xa ubeka imali ethe ngqo epokothweni njengotyalo-mali lwakho. Kuthatha ixesha ukuthatha isigqibo malunga nokuba ngawaphi amanqaku oza kuxhasa ngawo ukuze ufumane inzuzo kuwo.